Samba: Yakamira Server paDebian | Kubva kuLinux
Mhoro shamwari !. Kana isu tichida kuve neIyo yakazvimirira Server (Yakamira) kugovana zviwanikwa kungave kubva pabasa pedu; kana yeboka diki remuchina; kana yeLAN isina Microsoft-dhizaini dhairekita controller, zviri nyore kuzviita uchishandisa Samba.
Kune zvimwe zvishandiso zvemifananidzo yechinangwa ichi, pamwe nechombo chekupa Samba kuburikidza newebhu «SWAT». Kunyange zvakadaro, tinokurudzira kune vanotanga avo vanotanga munyika ino inoshamisa nemaoko. Hazvina kuomarara kana zvehudhimoni sekufunga kwevazhinji. Uye mukuita iwe unodzidza zvakawanda nezve SMB / CIFS network uye nezve Mvumo uye Kodzero paLinux faira masisitimu.
Tisati taenderera mberi, tinokurudzira kuverenga:
Samba: Tarisa uone SMB / CIFS network isina Samba
Hatizoona nzira yekugovana maprinta uchishandisa Samba. Kune avo vanoshuvira kushandisa suite iyi nekuda kwezvinangwa izvi, tinokurudzira kuverenga zvinyorwa zvinotevera sezvakaratidzwa mu Samba: Inodiwa Nhanganyaya. Iwe unogona zvakare kuverenga iyo chinyorwa CUPS: Mashandisiro uye nekugadzirisa maprinta nenzira iri nyore.
1 Pfungwa dzakakosha dzekufunga nezvadzo
2 Semuenzaniso server
4 Iyo smb.conf faira ndiyo inonyanya kukosha muSamba Suite
5 Tangazve kana Rodha zvakare iyo Samba sevhisi
6 Isu tinowedzera vashandisi kune iyo system uye kune iyo Samba mushandisi dhatabhesi
7 Isu tinowedzera zvakagovaniswa zviwanikwa
Pfungwa dzakakosha dzekufunga nezvadzo
Kunyangwe ese maaura akakomberedza Anoshanda maDirector uye avo Domain Dhairekitori, ayo pazviitiko zvakawandisa asingadiwe kana kusashandiswa zvisirizvo, kuisa nekugadzirisa Independent Samba Server IS inoshanda uye yakavimbika sarudzo.
Independent Server inogona kuchengetedzeka kana kusagadzikana zvinoenderana nezvatinoda, uye tinokwanisa kuimisa nenzira yakapfava kana yakaoma.
Kusimbiswa kwemushandisi kunoitwa pane server pachayo panogara zviwanikwa.
Kuti mushandisi akwanise kuwana zviwanikwa kubva kune komputa iri kure, vanofanirwa zvakare kunyoreswa muSamba mushandisi base.
Isu tinogona chete kuwedzera kune iyo Samba mushandisi dhatabhesi iyo vashandisi iyo yatovepo pane yedu server kana desktop desktop.
A Standalone Samba Server haina kupa Network Login, sezvinoita Domain Controller. Izvo zvakare hazvipe Login kune Domain.
Zvishoma zvatinochinja uye / kana kuwedzera paramita kune iyo faira /etc/smb.conf Pasina kutanga taziva zvakadzama zvatiri kuda kuzadzikisa, zvichave Zvirinani.
Iyo yekugovana zviwanikwa sevhisi muSamba inoshanda pane yeLinux fileystem, inosanganisira yayo yemukati chengetedzo. Matambudziko mazhinji anogadziriswa nekuteerera zvakakodzera kune faira uye dhairekitori mvumo.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise maitiro ekubata maitiro eiyo faira system kubva kune iyo faira smb.conf, pamwe nekunzwisisa mashandiro anoita UNIX / Linux faira system system.
Tinokurudzira kusashandisa maaccents, eñes, kana nzvimbo mumazita emafaira uye zviwanikwa zvakagovaniswa. Zvirinani shandisa zvinyorwa zvidiki zvemazita.
Govera mazita hakugone kudzokororwa paLAN. Zita rega rega rakasarudzika.
Kana pasina HERE WINS server muLAN yedu, tinogona kuita yedu Samba kuita saizvozvo nekuwedzera mu «zvepasi rose»Kubva pafaira smb.conf paramende anokunda rutsigiro = Ehe., iyo inokurudzirwa zvikuru.
zita: miwheezy. Domainamigos.cu. IP: 10.10.10.20. Vashandi: xeon, zeus uye triton. Mamwe mapoka: kuverenga
Kuburikidza neSynaptic kana kuburikidza neconsole isu tinoisa iyo package samba.
sudo kukodzera kuisa samba
Izvo zvinobatsira kwazvo zvakare kuisa iyo package smbclient. Isu tichaishandisa iko kuongorora.
Mukuita, mapakeji achaiswa - asi isu takamboisa zvimwe zvakabatana ne Suite- samba, isamba, samba-yakajairika-bin y tdb-maturusi. Zvakare, iyo faira inogadzirwa /etc/samba/smb.conf. Iyi faira ichagadzirwa chero bedzi mapakeji akaiswa samba-yakajairika y samba-yakajairika-bin, uye hazvizodzimwa kubva muchirongwa kudzamara tadzibvisa.
Iyo smb.conf faira ndiyo inonyanya kukosha muSamba Suite
Samba ine huwandu hukuru hwesarudzo dzekumisikidza, mazhinji acho asina kuratidzwa mumuenzaniso we smb.conf iyo inoisa nekumisikidza. Sarudzo dzakataurwa ne «;»Inoonekwa seyakakosha zvakakwana kuti iratidze, uye hunhu hwadzo hwakasiyana hwakasiyana nemufambiro weSamba. Sarudzo dzekumisikidza dzakataurwa ne «#«, Iva neSamba inokanganisa, uye inoonekwawo seyakakosha kuratidzwa.
Kana tichida kuona zvirimo mufaira tisingatarise sarudzo dzakataurwa pamwe ne «;"kana na"#«, Tinofanira kuuraya:
Kana tichida kuona zvirimo mufaira tisingatarise sarudzo dzakataurwa ne «#«, Tinofanira kuuraya:
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ikopi yefaira /etc/samba/smb.conf. Mune iyo faira pachayo tinowana nzira iyo Samba inokurudzira kugadzira kopi inoshanda, iyo yatino tsanangura pazasi. Sezvo mudzi tinoita:
cd / nezvimwe / samba mv smb.conf smb.conf.master testparm -s smb.conf.master> smb.conf
midzi @ miwheezy: / etc / samba # ls -l
Yakazara 32 -rw-r - r-- 1 mudzi mudzi 8 Mbudzi 10 gdbcommands -rw-r - r-- 2002 mudzi mudzi 1 Aug 805 4:12 smb.conf -rw-r - r-- 05 mudzi mudzi 1 Aug 12173 4: 12 smb.conf.master
Tarisa uone musiyano muhukuru pakati pe smb.conf inogadzirwa nenzira iyi uye neyekutanga. Sezvo saizi iri diki, mashandiro evhavha anowedzera zvinoenderana nezvinoratidzwa neSamba Team.
Zvekutanga zvemukati zvefaira /etc/samba/smb.conf Izvo zvichave (rangarira kuti isu hatizogadzirise kugoverana kweprinta):
workgroup = SHAMWARI netbios zita = MIWHEEZY chengetedzo = mushandisi
sevha tambo =% h server mepu kune muenzi = Mushandisi Akaipa teerera pam zvirevo = Hongu pam password shanduko = Hongu passwd chirongwa = / usr / bin / passwd% u passwd chat = * Enter \_ snew \_ s * \_ spassword: *% n \_ n * Retype \_ snew \_ s * spassword $ unix password sync = Hongu syslog = 0 log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 1000 dns proxy = Hapana usershare inobvumira vaenzi = Hongu panic action = / usr / share / samba / panic-action% d idmap gadziriro *: backend = tdb [dzimba] comment = Kumba Zvivakwa vanoshanda vashandisi =% S gadzira mask = 0700 dhairekitori mask = 0700 inotsvaga = Kwete
Hunhu hunoratidzwa hwakashinga ndihwo chete hwatinofanira kugadzirisa pakutanga. Ziva kuti, kunyangwe tichiita hunhu hwaSamba, takazivisa sarudzo chengetedzo = mushandisi yakapihwa kukosha kwayo kukuru.
Mutemo Wendarama: Zvishoma zvatinoshandura uye / kana kuwedzera maparamende kune iyo smb.conf faira tisina kutanga taziva zvakadzama zvatiri kuda kuita, zvirinani zvichazove.
Heino pfupiso yakaoma yeimwe sarudzo dzakaratidzwa. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota mhanya murume smb.conf.
workgroup: Kutonga uko Boka Rwebasa iro michina ichaonekwa kana ichigadzira webhu browser. Iyi paramende zvakare inodzora zita reDomain kana uchishanda nesarudzo chengetedzo = dura uye mune iyo timu inobatana neDomain. Tichazviona muzvinyorwa zvinotevera. Iyo default kukosha ndeye BASA REKUSHANDIRA.
netbios zitaSet zita reNetBIOS iro iro Samba server rinozozivikanwa pane network. Nekukanganisa yakafanana nechinhu chekutanga cheiyo FQDN kubva kumubati. Mumuenzaniso wedu iyo FQDN yechikwata iri miwehe.biz. Tinogona kushandisa rimwe zita rakasiyana neIye inomiririra server yedu yeSamba. Muchiitiko ichocho zvinokurudzirwa kuisa CNAME rekodhi mune yedu DNS.
chibatiso: Parameter inokanganisa maitiro evatengi kuSamba uye ndeimwe yezvakanyanya kukosha mufaira smb.conf. Iyo default kukosha ndeye mushandisi.
tambo yeserver: Kudzora izita ripi rinoratidzwa mune zvakataurwa zvinoonekwa muwebhusaiti padyo nezita reboka.
mepu kumuenzi: Parameter iyo inoshanda chete kana yaiswa chengetedzo = mushandisi o chengetedzo = dura. Iko kukosha "Akaipa Mushandisi" inotaurira Samba kuti irambe password isiriyo, kunze kwekunge mushandisi ASI aripo, mune izvi vanozotorwa seMuenzi kana "muenzi«. Kana isu tisingade kubvumidza zvikamu zvevaenzi, isu tinofanirwa kuchinja kukosha kwayo ku Never, iri chaizvo kukosha kwekutanga, uye zvakare chinja paramende usershare tendera muyenzi a kwete, iri zvakare kukosha kwekusarudzika.
teerera pam kurambidzwa: Inotonga kuti kana Samba inofanirwa kuteerera zvirevo zvePAM pachavo «Plugable Yekusimbisa Module«, Nezve iyo Mirayiridzo Yekutungamira kweVashandisi Maakaunzi uye Masangano. Iyo default kukosha ndeye kwete.
pam password shanduko: Inotaurira Samba kuti ishandise PAM yeshanduko yeshoko rinokumbirwa nemutengi weSMB. Iyo default kukosha ndeye kwete.
passwd chirongwa: Chirongwa chinoshandiswa kuseta UNIX mapassword evashandisi.
passwd chat: Chain inodzora hurukuro inoitika pakati peya dhimoni smbd uye chirongwa chemuno chekushandurwa kwephasiwedi chinotsanangurwa muparamende yapfuura.
unix pasiwedhi sync: Inotaurira Samba kuti ienzanise iyo SMB password neiyo UNIX password, sekureba sekutanga shanduko. Iyo default kukosha ndeye kwete.
vanoshanda vanoshanda: Chinyorwa chevashandisi vanobvumidzwa kupinda mugove.
Tangazve kana Rodha zvakare iyo Samba sevhisi
Pese patinoita shanduko dzakakosha, kunyanya muchikamu «[zvepasi rose]" ye smb.conf, isu tinofanirwa kutangazve sevhisi. Kana isu tatova nevashandisi vakabatana neserura yedu, pese patinotangazve Samba, tinozovabvisa. Ndokusaka, uye zvichingobvira kubva zvino zvichienda mberi, isu tichango rejesa sevhisi kana isu tichiwedzera kana kugadzirisa zviwanikwa zvakagovaniswa. Kuti titangezve sevhisi, isu tinoita se mudzi:
sevhisi samba inotangazve
sevhisi samba kurodha zvakare
Isu tinowedzera vashandisi kune iyo system uye kune iyo Samba mushandisi dhatabhesi
Isu tinogona chete kuwedzera kune iyo Samba mushandisi dhatabhesi iyo vashandisi iyo yatovepo pane yedu yemuno server
Mumuenzaniso wedu, mushandisi xeon yakawedzerwa panguva yekuisirwa Wheezy. Naizvozvo, hatizowedzere kune vashandisi veboka. Boka revashandisi iripo pane system uye yakagadzirwa panguva yekuisirwa.
Mimwe mirawo sarudzo smbpasswd Ndizvo:
-a: Wedzera mushandisi wakatsanangurwa kune yemuno faira smbpasswd.
-xMushandisi akaratidzirwa anofanirwa kubviswa kubva kune yemuno faira smbpasswd. Inowanikwa chete kana smbpasswd inomhanya se mudzi.
-d: Akaundi yakaratidzwa yemushandisi inofanira kunge yakaremara. Inowanikwa chete kana smbpasswd inomhanya se mudzi.
-e: Anopesana nesarudzo -d chero bedzi account yemushandisi yakaremara.
Kugadzira vashandisi muchikwata chedu, tinozviita nemirairo inozivikanwa adduser.
Kugadzira boka mabhuku:
Kuwedzera vashandisi kudata reSamba:
smbpasswd -a mudzi
Isu tinobatana neboka mabhuku kune vashandisi vatinoda:
Zvinokurudzirwa kujoina yega yega mushandisi yakagadzirwa kuboka vanozvishandisa, kana tichida kupa mvumo kune vese vashandisi vatakagadzira, pane imwe sosi. Nzira iri nyore yekubatanidza vashandisi vazhinji kuboka iri nekugadzirisa zvakananga iyo faira / etc / group, uye kuwedzera runyorwa rwevashandisi vakaparadzaniswa nekoma. Vanogona kutungamirirwa neboka mabhuku. Isu tinofungidzira kuti tinobatana nevashandisi kuboka vanozvishandisa.
Panzvimbo yebasa, kubvisa vashandisi vakagadzirwa vachishandisa adduser, isu tinofanirwa kugadzirisa iyo faira /etc/gdm3/greeter.gsettings uye kusagadzikana sarudzo disable-mushandisi-runyorwa = ichokwadi, kuitira kuti HAPANA mushandisi runyorwa runoratidzwa kana uchipinda. Aya ndiwo maitiro akajairwa chero eWindows mutengi komputa akabatanidzwa kune Domain.
Saizvozvo, kana isu tichida kuti vashandisi vakagadzirwa varege kutanga chikamu chiri kure kuburikidza ssh, isu tinogadzirisa iyo faira / etc / ssh / sshd_config uye wedzera kumagumo kwefaira kuraira RegaiVashandisi. Muenzaniso:
[....] # uye ChallengeResponseAuthentication kuna 'kwete'. UsePAM hongu KubvumiraUsers xeon
Isu tinowedzera zvakagovaniswa zviwanikwa
Muenzaniso 1: Tinoda kugovera dhairekitori / kumba / xeon / mumhanzi yevashandisi vese vakanyoreswa. Mvumo yacho ichaverengerwa-chete. Chekutanga pane zvese isu tinogadzira iyo folda / kumba / xeon / mumhanzi uye isu tinogadzirisa muridzi wayo uye mvumo kana zvichidikanwa. Sezvo mushandisi Xeon isu tevedzera:
mkdir / imba / xeon / mumhanzi ls -l / imba / xeon | grep mumhanzi
Zvino pakupera kwefaira smb.conf tinowedzera zvinotevera:
[mumhanzi-xeon] comment = Yemunhu mimhanzi dhairekodhi nzira = / imba / xeon / mimhanzi inoverengwa chete = Hongu vashandisi vanoshanda = @users verenga rondedzero = @users
Mushure mekugadziriswa kune iyo faira, isu tinoita testparm semushandisi xeon uye tinowedzerazve sevhisi se mudzi. Isu tinogona zvakare kumhanya mirairo miviri senge mudzi:
testparm sevhisi samba kurodha zvakare
Kuti titarise sevhisi ichangobva kugadziridzwa tinogona kuzviita nekuita unotevera kuraira pakombuta pachayo:
smbclient -L yemukatihost -U%
Muenzaniso 2: Tinoda kugovera dhairekitori / kumba / xeon / mumhanzi yevashandisi vese vakanyoreswa. Mvumo yacho ichaverengerwa / kunyorerwa xeon uye kuverenga-chete kune vamwe vese vashandisi veboka vanozvishandisa. Hatina chikonzero chekushandura muridzi kana mvumo pafolda. Isu tinongo chinja marongero ekugovana mufaira zvishoma smb.conf.
[mumhanzi-xeon] comment = Yemunhu mimhanzi dhairekodhi nzira = / imba / xeon / mimhanzi inoverengwa chete = Hapana vashandisi vanoshanda = @users vanonyora rondedzero = xeon verenga runyorwa = @users
Muenzaniso 3: Tinoda kugovera dhairekitori / imba / xeon / accounting yeboka revashandisi mabhuku. Nhengo dzese dzeboka dzinenge dzaverenga mvumo. Vashandisi triton y zeus ivo vanozogona kunyorera kune yakagovaniswa dhairekitori.
Iye zvino KANA tichifanira kugadzirisa muridzi uye mvumo yefaira accounting mushure mekugadzirwa, kuti vagone kunyora triton y zeus ndiani nhengo yeboka mabhuku. Tinofanira zvakare kutarisira kuti mushandisi wekupedzisira anogadzira kana kugadzirisa faira haazove muridzi wayo, kuti igadziriswe nevamwe vashandisi nemvumo yekunyora.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise maitiro ekubata maitiro eiyo faira system kubva ku smb.conf, pamwe nekunzwisisa mashandiro anoita UNIX / Linux faira system system.
Mune zviitiko izvi isu tinofanirwa:
Zivisa zviri nyore ndiani achave Muridzi Wemushandisi uye ndiani achave iye Muridzi Boka reAkagovaniswa Dhairekitori.
Bvumira kunyora kuDhairekitori Yakagovaniswa neBoka reMuridzi
Dudzira zvishoma SGID (Gadza Boka ID) yedhairekitori panguva yekugadzirwa kwayo.
Taura zvakanaka mufaira smb.conf nzira dzekugadzira mafaera uye madhairekitori mukati medu zviwanikwa zvakagovaniswa.
Mhinduro yakapusa uye inogona kuitika mukuita isu tichava nayo kana isu tinoita se mudzi:
mkdir / imba / xeon / accounting chown -R midzi: makaunda / imba / xeon / accounting chmod -R g + ws / imba / xeon / accounting ls -l / imba / xeon
Uye isu tinowedzera zvinotevera kumagumo eiyo smb.conf faira:
[accounting] comment = Dhairekita yeakaunzi nzira = / imba / xeon / accounting kuverenga chete = Hapana vanoshanda vanoshandisa = @ maakaunzi nyora rondedzero = triton, zeus verenga rondedzero = @ maakaundendi simba gadzira modhi = 0660 simba dhairekitori mode = 0770
Isu tinobva tangotarisa syntax yekutanga yeiyo smb.conf kuburikidza testparm uye tinowedzerazve sevhisi kuburikidza sevhisi samba kurodha zvakare. Tinogona zvakare kumhanya smbclient -L yemukatihost -U%. pane server yemuno, uye smbclient -L miwheezy -U% o smbclient -L mywheezy.friends.cu -U% kubva pakombuta iri kure.
Nguva ndeyekuti kubva kure kure komputa isu tinobatana kune yakagovaniswa sosi uye tinoita zvese zvinodiwa bvunzo. Zvinokurudzirwa kutarisa mashandisiro anoita mushandisi muridzi wemafaira uye mafaera sezvavanogadzirwa mukati mekushandisa.
Zvinokosha: Mushandisi mudzi kana mushandisi xeon uye kazhinji chero nhengo yeboka mabhuku, unogona kunyora kubva kuchikamu chemuno chakatangwa pakomputa imwechete kana na sshndiko kuti, pasina kushandisa SMB / CIFS protocol. Kana iwe ukagadzira dhairekitori kana faira munharaunda, rangarira kupa zvakare mvumo dzakakodzera. Tarisa ne ls -l. Kusaita zviri pamusoro ndiko kunokonzera nyonganiso.
Shamwari, ndiregerere kureba kwechinyorwa uye ndinovimba chichava chimwe chekushandisa kwauri. Kusvikira inotevera inotevera!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Networks / Maseva » Samba: Yakamira Server paDebian
Excelent senguva dzose. Aya marudzi ezvinyorwa anoongwa kana tichishanda nemaseva. 😉
Akanaka kwazvo rusununguko asi kwandiri zviri nani kushandisa MaharaNAS kune iyo mhando yechinhu
Federico Antonio Valdes Toujague akadaro
Ndatenda nematauriro ako !!!. Freeke, FreeBSD's FreeNAS imwe nyaya yemusango uye ini ndinogona kukumikidza chinyorwa kwairi. Mukupedzisira iri Samba pamusoro peFreeBSD.
Pindura kuna Federico Antonio Valdés Toujague
Yakanaka kwazvo posvo ndinofanira kutaura, sezvandaigara ndichitaura dai iwe wakatumira izvi makore mashoma apfuura, zvingadai zvakandichengetera matambudziko mazhinji, asi zvakanaka kuti mumwe munhu anofarira kuratidza maitiro ekugadzirisa samba, Kwaziso
Sekutaura kunoita "hakunonoke kana mufaro wakanaka" uye imwe yacho "zviri nani kunonoka kupfuura kusati kwamboitika." Ndatenda nekutaura. Ini ndakatanga kushandisa Samba ini ndinofunga kutenderedza 2007. Kusvika parizvino ndakanga ndisina kukwanisa kutumira chero chinhu nezvazvo.
Nenzira imwecheteyo, ndanga ndichishandisa samba kwenguva ingangoita yakafanana, asi ndinoona kuti wakwanisa zvakawanda uye wakarurama kuti "hazvina kunonoka kana mufaro wakanaka", zvaiita seni, ndinofanira kutaura izvozvo zvakanaka kwazvo kuti mumwe munhu agovane ruzivo rwavo, vazhinji Dzimwe nguva mumwe haashingi kana kushaya nguva, kwandiri ndiyo yekutanga, Kwaziso
Shamwari @fico, ndinonyatsoda zvinyorwa zvako. Ivo vakanyatsotsanangurwa uye vakatsanangurwa. Ndatenda.
Ndinovimba vanobatsira kwauri. Ndicho chinangwa !!!.
Hongu. Ndi 🙂
Nenzira, ndangoona chinyorwa chako chakatumirwa pane imwe peji (http://www.infognu.com.ar/2013/08/samba-servidor-independiente-en-debian.html) uye chirevo kune sosi idiki chaizvo. Izvo hazviitwe. Merit kune uyo akafanirwa nazvo, damn it! Handizive kana kubva pano vanogona kukumbira vanhu ivavo kuti vaise vanoita zvinhu nenzira hombe. Kune ziso risina kudzidziswa zvaizopfuura sekunge vakazvigadzira uye vakazvitumira.
Mr. munyori wepositi, ko kana iwe ukagadzira chinyorwa chekugovana mafaera kuburikidza nesamba yevashandisiwo zvavo, ndinoreva chimwe chinhu chisingawedzerwe uye chakajeka senge nzira yekugovana kubva ku linux kuenda ku linux uye kubva ku linux kuenda windows asi kwete kubva kune imwe saka inyanzvi nzira asi uchida kugovana mafaera pakati pePC kumba.
Nezve iyo kesi, ini ndinokurudzira kushandisa ssh yeLinux - Linux uye winscp yeWindows - Linux. Pane zvinyorwa zvinoverengeka pane ino saiti.
Iyi imwecheteyo posvo, kunyangwe ingaite senge yakaoma, kana iwe ukateedzera nekunamatira iwo mashoma mairairo ainosanganisira, inoshandawo kune network yemumba.
Kunyangwe zvingave zvinoshanda kushandisa iyo SMB / CIFS system kushandisa iyo imwecheteyo faira yekugovana protocol yeWindows (kana yakagovaniswa maforodha mapfupi).
Ini ndichaita zviedzo zvangu kuti ndikwanise kuita dzidziso yemagadzirirwo akagovaniswa dhairekitori muGNU / Linux (mune yangu, Debian Wheezy) kuitira kuti network neWindows dzizive seyagovaniswa folda.
zvakanaka kwazvo uye kureba kwakakodzera, asi pamwe iwe unofanirwa kutaura nezve oslevel paramende kutanga usati wayanana nema windows.
Pindura kune alevel
Ziva kuti ndeye network isina Windows Domain Controller. Isu tinoshandisa iyo paramende kana tabata nemuchina wakabatanidzwa kune Domain.
kana ndiine imwe nguva ndicha
[offtopic] Ndinoda kutumira Tutorials yeGIMP. Zvinogona?
Shamwari @giskard, ndangoshanya http://www.infognu.com.ar/2013/08/samba-servidor-independiente-en-debian.html, uye ini handina kuona chero chirevo kune ino positi. Vakagadzira kopi / kunama padama, Hahahahahaha. Iyo inoratidza kuti, zvirinani, iyo posvo ndeye yemhando yakanaka. Ini ndoti, kwete? Hahahahahaha.
Pedyo nemagumo nemavara madiki ndiko kubatana kunoti "sosi" uye kunongedzera kune ino saiti. Asi kuzviita nenzira iyoyo kunoratidzika kwandiri sehunhu uye kushaya rukudzo. Neraki, pano isu tinoziva kuti ndiani munyori 🙂
Ivo vanoisa mareferenzi asi hazvigone kucherechedzwa kuti vaifanira kunge vakataura pakutanga kwechinyorwa
Mune arch wiki inoti seye Shanduro 3.4 zvinokurudzirwa kushandisa pdbedit pachinzvimbo che smbpasswd.
Mumwe mubvunzo, sekureva kweshamwari usati wawedzera mushandisi kuSamba mushandisi anofanira kugadzirwa muchirongwa asi aine / bin / nhema
useradd -s / bin / nhema myuser
0.o ichokwadi here?
Shamwari @ truko22, uye zvakawandisa, kune avo vanobvunza mibvunzo yakafanana. Rangarira kuti isu takagara tichitaura kuti isu tinongopa a Pinda yekupinda kune musoro wenyaya. Isu tinokurudzirawo kuverenga zvinyorwa zvinotevera. Mukupedzisira, hunhu hwebasa ibasa reiye anorishandisa, nenzira inopindura kune zvavanoda uye padanho rekuchengetedza rinovagutsa.
Semuenzaniso, iyo mvumo nyaya inogona kudzivirirwa kana isu tikabvumira chero munhu kunyorera kugove achishandisa chmod 777. Ehezve iyo haisi mhinduro yakachengeteka.
Unogona kudzivirira mushandisi kutanga chikamu chemuno kana kuburikidza nessh kana tikachigadzira kuburikidza adduser mushandisi -shell / bin / nhema. Ndokunge, mushandisi saka akagadzirwa haakwanise kuwana chinongedzo kana koni.
Mune mamwe mazwi, Samba inogona kugadziridzwa munzira dzakawanda, kubva pane yakapusa kusvika kune yakaoma kunzwisisa.
Chii chinoitika?. Kana isu tikanyora iyo posvo tisingabvumidze vashandisi kuwedzerwa kuSamba kuti vapinde mukati imomo, ivo zvechokwadi vanobvunza kuti sei. Ndosaka tichisarudza kuzvinyora nenzira yechinyakare, uye rega munhu wese atore mhedzisiro yake.
@ truko22, Ndatenda nekundipa iyo chaiyo poindi yekuita iyo yapfuura komendi !!!
Ndatenda zvikuru ikozvino ndanzwisisa 😀 nezve - shell / bin / nhema
Shamwari @ truko22, ndakanganwa nezve pdbedit. Kubva Etch ndakazojaira kushandisa smbpasswd. Uyu murairo unogona kuitiswa nechero mushandisi pane system, uye maitiro uye mhedzisiro zvinosiyana. pdbedit, inogona zvakare kushandiswa, asi inogona kungokumbirwa nemudzi mushandisi.
Nezve Samba, unogona kunyora zvinyorwa zvese pane yakawanda yemirairo yayo.
Zvakanaka chaizvo !!
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Makorokoto nekutenda nemupiro wakadai
Ini ndaida kukubvunza iwe kana paive nechinyorwa nezve samba sedomain controller uye kana ichikwanisa kudzora domeini nemapoka ebumbiro senge windows server, ndinoreva kudzivirira kuchinja zvivakwa zvemambure kero, uchishandisa pendrives, nezvimwe.
Pindura kuna joseuzin
Ricardo Mejias akadaro
Mhoroi, wakadii Fico, ndaisa Samba 3.6 ine LDAP uye LAM 3.7 - ndinoda kuziva kana iwe uchiziva kubvumidza vashandisi kuchinja password kana uchitanga chikamu sezvo ichindiudza "hauna mvumo yekuchinja password" kwaziso ...
Pindura Ricardo Mejias
Dzidziso yekuti ungaisa sei WepCrack pane Linux Mint 13